हातखुट्टामा भएको घाउ चाडै निको हुदैन भने यस्ता कारणले हुन सक्छ ! «
हातखुट्टामा भएको घाउ चाडै निको हुदैन भने यस्ता कारणले हुन सक्छ !
हामीलाई कहिलेकाँही विभिन्न कारणले गर्दा घाउ हुने गर्छ । कुनै घाउ आफै निको हुने गर्छन् त कुनै दबाइ खाएपछि निको हुने गर्छन् । तर कहिलेकाँही हाम्रो शरीरमा आउने घाउ निको हुन धेरै समय लाग्ने गर्छ । आफै निको हुनुपर्ने घाउ पनी निको हुने गर्दैन । यस्तो भएमा तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ ।
घाउ ढिलो निको हुनको कारणहरु यस्ता छन् :
१) पोषण : भिटामिन तथा खनिज पदार्थले हाम्रो शरीरमा आउने घाउहरूलाई छिट्टै निको हुन मद्धत गर्छन् । यसका लागी पर्याप्त मात्रामा सागसब्जी र फलफुल खाने गर्नुपर्छ । यदी यी तत्व शरीरमा पर्याप्त मात्रामा भएनन् बने हाम्रो घाउ ढिलो निको हुन्छ ।
२) संक्रमण : घाउ भएको ठाउँमा राम्रोसँग सफा गरिएन बहने यसमा विभिन्न प्रकारका ब्याक्टेरियाले संक्रमण गर्छन् । यसले गर्दा घाउ निको हुनुको सट्टा झन् बड्दै जान्छ । त्यसैले घाउ भएको समयमा सरसफाइमा पनी ध्यान दिनुपर्छ ।
३) मधुमेह : यदी कोही मानिसमा मधुमेह रोग छ भने पनी घाउ ढिलो निको हुने गर्छ । मधुमेहका बिरामीको शरीरमा ब्लडसुगरको मात्रा धेरै हुने भएकाले घाउ वा चोटपटक छिट्टै निको हुँदैनन् र संक्रमणको जोखिम हुन्छ । यदी घाउ निको भइरहेको छैन भने तुरुन्तै मधुमेह जाँच गराउन जानुपर्छ ।
४) औषधि उपचार : घाउ ढिलो निको हुनमा हामीले सेवन गरिरहेका औषधि पनि जिम्मेवार हुन सक्छन् । केमोथेरापी र रेडिएसनका औषधिमा हुने रासायनिक पदार्थले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्छन् । फलस्वरुप घाउ निको हुन कठिन हुन्छ ।
५) रगत संचालनमा अवरोध : हाम्रो शरीरले घाउ निको पारिरहेका बेला सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका राता रक्तकणले निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । राता रक्तकणले नयाँ कोष घाउ भएका ठाउँमा ओसार्छन्, जसबाट हाम्रो शरीरले कोलाजिनको सहायताले नयाँ छाला निर्माण गर्छ । तर रक्त सञ्चारमा अवरोध आए वा ढिलो भए यसले घाउ निको हुन पनि ढिलो हुन्छ ।